Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah ula wareegay xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, kadib xaflad xalay lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho.
Xafladani xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya mudane, Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan Golahiisa Wasiirada, Gudoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale.
Gudoomiyaha xilka wareejiyay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka hadlay goobtii xafladda ayaa sheegay inuu soo qabtay waxyaabo badan oo la taaban karo, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka laamiyada ah ee Muqdisho qaarkood.
Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in shaqada Gobolka Banaadir ay tahay arin masuuliyad weyn ah, maadaama shacabka ku nool caasimadda aad wakiil ka tahay.
Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed, ayaa sheegay inuu la imaan doono wax qabad wanaagsan oo ku aadan xilka culus ee loo igmaday, wuxuuna wada shaqeyn ka dalbaday shacabka Soomaaliyed.
Taabit ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono ammaanka caasimadda Muqdisho oo Ururka Al Shabaab ay dilal qorshaysan ka gaystaan, wuxuuna sheegay isbedelka maamulkiisa in laga dareemi doono caasimadda Muqdisho oo dhan.
April 16, 2017 Geesey